Ebumnuche: amụma amụma na asọmpi asọmpi | Martech Zone
DemandJump: Predictive Marketing na Competitive ọgụgụ isi
Bọchị Sọnde, Machị 6, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ntaneti di na intaneti bu uzo di egwu nke nepu na ihe omuma. Mana dika nchọpụta CMO nke afọ a, naanị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị ahịa nwere ike gosipụta mmetụta nke ahia ha na-emefu, naanị ọkara na-enwe ike inweta ezigbo ikike qualitative nke mmetụta, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20% nwere ike tụọ mmetụta ọ bụla ihe obula. Ọ bụghị ihe ijuanya na ịzụ ahịa ahụ nchịkọta A na-atụ anya mmefu ga-abawanye 66% na afọ atọ sochirinụ.
Dika onu ogugu nke ndi ahia ahia na ahia ahia na-akwaga na ntaneti, ndi ahia choputara na ha kwesiri inweta ozi n'ihu ndi mmadu kwesiri ekwesiri ebe ha no. Ahịa ọdịnaya, mgbasa ozi mgbasa ozi na mgbasa ozi na-eme ka ndị ọzọ na-azụ ahịa na-aga n'ihu.
ChọọJump bụ nnukwu ọganiihu n'ichepụta ahịa ọgụgụ amụma, na-enyere ndị ahịa aka ikpughere ohere ịzụ ahịa, soro mmegharị asọmpi ma mee ka okporo ụzọ gị na mgbanwe gị gbanwee. Anya ngwa ngwa na dashboard ha na-enye gị nchịkọta nke nyocha na ohere gị, gụnyere ọgbọ ndu, akụkọ na ohere PR, ohere eCommerce, ohere mmekọ, blọgụ na ohere ọdịnaya, na ndị ọzọ.
Ọgụgụ Ahịa Ọdịnaya
Iji ngwa ọgụgụ isi nke DemandJump, ị nwere ike nyochaa ọdịnaya niile ndị asọmpi gị na-arụpụta, otu ọ na-esi arụ ọrụ ọfụma, ọbụnakwa mata isi mmalite nke ozi ntinye aka na ọdịnaya ha.
Nke a nwere ike inyere gị aka ịkọwapụta ndị na - eme ihe ike na saịtị na - ezo aka nke ga - ebugharị okporo ụzọ gị. Ikpo okwu a na - enye mmekorita nke mmekorita nke gi ka ijiri jikwaa ma soro kwa isi mmekorita gi na ndi isi.
Nzuzo nzuzo n'azụ ChọọJump bụ nchịkọta nghọta siri ike ị nwere ike ịtụtụkọta site na ikpo okwu iji duzie ọdịnaya gị na atụmatụ nkwado. Were ya na ị nwere ahịa ịzụ ahịa siri ike gafere ọtụtụ mgbasa ozi mgbasa ozi, gosipụta mgbasa ozi mgbasa ozi, nkwado na ọwa ndị ọzọ. DemandJump nwere ike inyere gị aka ịkọwapụta isi mmalite ndị na-anya ụgbọ ala na njikọ aka, ọ bụghị naanị netwọ mgbasa ozi ha na-agba. Ọbụna ha na-enye usoro nke onwe ha nke algorithm iji dozie ohere ndị ga-eweta mmetụta kasịnụ.
Ingghọta usoro ịzụ ahịa ndị asọmpi gị na-eme atụmatụ ha nwere ike inyere gị aka ịghọta nyiwe ịkwesịrị ịsọ mpi.
na ChọọJump, ndị na-ere ahịa n'ịntanetị gafee ụdị azụmaahịa ọ bụla - site na e-commerce, mbipụta, azụmahịa na azụmaahịa, na ndị na-abụghị uru nwere ike nweta echiche bara uru dị ukwuu na atụmatụ ahịa ahịa ha ọtụtụ. Hụ ebe ị kwụgidere ndị asọmpi gị na omume ndị ị kwesịrị ịme iji too.
Gaa na Omume!
Ngosipụta: Mụ na onye guzobere ya arụ ọrụ Shawn Schwegman kemgbe ọtụtụ afọ, anyị etinyela ihe ngwọta maka mbọ nke anyị, ma na -emepụta mmekọrịta na-aga n'ihu na ChọọJump.
Tags: ad netwọk ọgụgụ isiMgbakwunye marketingasọmpi ọgụgụ isicontent Marketingina-awụlikwa eluachorodijitalụ ahịa ọgụgụ isie-azụmahịaecommercechọta ndị na-eme iheesi chọta influencersinfluencerikpo okwu influenceredu ọgbọahia ọgụgụ isiozi referralsnchịkọta amụmaamụma ọgụgụ isiamụma ịre ahịammekọrịta ọha na ezeụzọ ntinye aka
Speutable: Native Mgbasa ozi esighi na-apụ ndị ọbịa